Kutheni le nto kukho uqoqosho? | Martech Zone
NgoMgqibelo, Disemba 6, 2008 NgoLwesibini, Oktobha 30, 2012 Douglas Karr
Abanye abantu bakholelwa kulawulo gwenxa lwenkampani, ukubawa, uqoqosho lwehlabathi, imfazwe, ubugrogrisi kunye / okanye ukungakhathali kukarhulumente konke kukhokelele kudodobalo lwehlabathi esijamelana nalo. Ingayiyo. Ndiyakholelwa ukuba zonke ezi zinto zinokuba ziimpawu… okanye mhlawumbi imigca ebiphoswe zezinye zezona ngqondo zikhulu ehlabathini.
Ndicinga ukuba ukwehla kwamandla emali yincopho yotshintsho eziswe yinkqubela phambili kunye nokukhula kwetekhnoloji. Iidigri zeminyaka emine ziyacotha, imisebenzi yokuvelisa iyazenzekela, kwaye ukufikeleleka kolwazi kubangela enye yezona zinto ziphazamisayo kubutyebi nakwezorhwebo ezakha zabonwa lihlabathi.
Ngaba oko kuthetha ukuba onke amathemba alahlekile? Hayi! Kodwa oko kuthetha ukuba isahlulo sehlabathi sitshintshele kwelinye igiya-sishiya abanye ngasemva. Abo bakhokelayo ayithethi ukuba bazizityebi okanye bafundile… ngoosomashishini, iadaptha, umntu ocinga nzulu, kunye nomenzi weengcinga.
Le yimbali iyaziphinda, kodwa kwisikali sokubonisa esingakhange sikubone ngaphambili. Bambelela ngokuqinileyo, phendula ngokukhawuleza, yenza okungakumbi… Le izakuba kukukhwela okungathethekiyo.
tags: ibhlogi yentengiso yeqanda
Dec 6, 2008 ngo-6:29 PM
Imbali iye yakuphinda oku ngaphambili, amaxesha amaninzi, kwaye iya kuqhubeka isenjenjalo ngokuphindaphindiweyo. Ngumjikelo wendalo. Izinyuko ezi-2 ukuya phambili, umva omnye. Boom, qhuma, qhuma, qhuma, qhuma, qhuma. Kwaye imijikelo emincinci phakathi kwemijikelo emikhulu.
Sisanda kuqala lo msinga, kwaye mkhulu, ukubuya umva. Amanyathelo azayo aya phambili aya kuba nomdla, xa sele eqalile.
Dec 6, 2008 ngo-11:53 PM
Ukudodobala koqoqosho kusisiphumo soloyiko kwiimalike zezemali ezihlayo kuthi sonke. Ukudodobala koqoqosho kwakubizwa ngokuba yi-panics, emva phayaa ngenkulungwane ye-19. Akukho ngqiqweni, kanye njengodumo “lokuchulumanca ngokungekho ngqiqweni” kweqamza letekhnoloji yee-1990s.
Isantya esicacileyo sokwenziwa kwezinto zobuchwepheshe asingonobangela, kodwa isenokuba lunyango lokudodobala koqoqosho.
Dec 7, 2008 ngo-6:30 PM
Andivumi, Clark! Sizifumana njani iinkokeli zethu zikarhulumente ukuba 'zihlangule' amacandelo afanelekileyo emisebenzi aya kuthi ahlawule ekuhambeni kwexesha?
Ngomhla wama-8 ku-Disemba 2008 ngo-3: 50 AM
Isithuba esinomdla kuDouglas, ndicinga ukuba umdlalo wokutyhola uyeza esiphelweni ngokupasiswa kwentonga karhulumente, ngoku siyaqonda ukuba kufuneka sithathe inyathelo. Elinye lawona macandelo makhulu aya kutshintsha iya kuba lelo lokutshintsha ekuqhagamshelaniseni, kunokuba ningxole, abathengi bakho. Iintengiso zilimaza kakhulu kuzo zonke imidiya entsha yoluntu; kwaye akukho mntu waziyo ukuba enze ntoni ngayo okwangoku. Ukukhwela ibumpy ngokwenene.